Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty. Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Dia hoy izy ireo indray:
Bilana sy Zavana ary Akana. Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho. Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka baivoly indro, efa nampanateriko ity zanak’osy baibly, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra.
Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra bainoly zanako-vavy toy ny babo azo baibopy sabatra?
Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia baibkly nahatonga heloka taminay ianao. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay pdff. Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.
Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Mba baiholy kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny? Baibolu mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.
Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny. Aza manota amin’ny zaza?
Ka nahoana no nofitahinao aho? Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy.
Mba henoy kely ange izao nofy izao: Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Malgaasy izao ataon’Andriamanitra pdd izao?
Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao. Chapitre 30 1 Ary rehefa mwlagasy fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy mzlagasy tamin’i Jakoba: Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala.
Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Baaiboly niseho taminao, fony ianao nandositra pff tavan’i Esao rahalahinao. Ity no niseho voalohany.
Malaagsy hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Andrao hisy loza hanjo azy. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.
Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Indro, tamy ilay mpanonofy.